फोन: ०8686 75 755 29 373737 37 36।।
के कारणहरू छन् जुन नेतृत्वको बिन्दु प्रकाश स्रोतहरू मनपर्दछन्?
एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोतको विशेषताहरू: १. कार्यक्षमता: दुबै एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोत र एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन कम्प्युटर द्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ वास्तविक समयमा विज्ञापन जानकारी प्रसारित गर्न, प्रसारण विज्ञापन भिडियो प्रसारण गर्न, र इच्छा सामग्रीमा विज्ञापन सामग्री बदल्न। एलईडी डिस्प्लेसँग हाइग छ ...
नेतृत्वित रेखीय लाइटहरू र रेलिंग ट्यूबहरूमा के समान हुन्छ?
सर्वप्रथम तातो खेर जाने, वास्तवमा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले बत्ती र लालटेनमा तातो खपत बुझ्दैनन्। धेरै व्यक्तिले शेल छुन्छन्। त्यसो भए शेल तातो छ वा छैन, होनि, ती दुवैले कुनै पनि व्यावहारिक उत्तर भने छैनन्। यो तातो छ कि छैन को अन्तिम उत्तर यो हेर्नु हो ...
एलईडी बाढी बत्तीको आवेदन परिदृश्य के हुन्?
हामी एलईडी स्पटलाइट वा एलईडी स्पटलाइटहरू पनि कल गर्न सक्दछौं। LED फ्लडलाइटहरू अन्तर्निहित चिप द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ। अब छनौट गर्न उत्पादनका दुई प्रकार छन्। एउटा पावर चिप्सको संयोजन हो, र अन्य प्रकारले एकल उच्च-शक्ति चिप प्रयोग गर्दछ। दुई बीचको तुलनामा, पूर्व अधिक स्थिर छ ...
कसरी एलईडी फ्लडलाईट को दैनिक रखरखाव छ?
वास्तवमा, एलईडी स्ट्रीट लाइटहरूको लागि यो होइन कि हामीले तिनीहरूलाई स्थापित गरेको हो, र तिनीहरूलाई प्रबन्ध गर्न आवश्यक छैन। केवल नियमित मर्मत र रखरखावले लामो उपयोग समयको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ। एलईडी फ्लडलाइटहरूका लागि, बाहिरी प्रयोगको बत्तीहरूमा बत्तीहरू सफा गर्नुहोस्। मुख्य कार्य भनेको सतहमा भएका धुलोसँग डिल गर्नु हो। मा ...
नेतृत्व रेखा लाईन ब्रान्ड किन प्रकाश स्रोतको दक्षता मा ध्यान दिनु पर्छ?
नेतृत्वित लाइन बत्तीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको होटेलको रातको छवि परिवर्तन गर्नु हो, ताकि भवनलाई पुनः आकार दिन र रातमा पुन: निर्माण गर्न सकून्, आकर्षण र विशेषताहरू जुन दिनको समयमा प्रतिबिम्बित हुन सक्दैन, अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न। १, दक्षता दक्षताको लागि ध्यान दिनुहोस् ...
कसरी LED लाईराइट बत्ती को लचकता को बारे मा?
एलईडी रैखिक दीपक एलईडी भित्ता वॉशर श्रृंखला एल्युमिनियम प्रोफाइल दीपक शरीर हो। कम्प्याक्ट र लाइटवेट अन्त कभर र माउन्टिंग ब्रैकेट एल्युमिनियम मिश्र धातुको उच्च-दबाव मरेका कास्टिंग उच्च-तापमान प्रतिरोधी सिलिकॉन रबर सीलिंग रिंगले बनेको छ, जुन जलरोधक र भरपर्दो छ। बत्तीहरू हुन सक्छन् ...
एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोत कस्तो प्रकारको हो?
एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोत एक नयाँ प्रकारको सजावटी प्रकाश हो, जुन रैखिक प्रकाश स्रोत र बाढी प्रकाशको लागि पूरक हो। स्मार्ट बत्तीहरू जसले प्रदर्शन पर्दाको के विशिष्ट विवरणहरू बदल्न सक्छ जुन पिक्सेल रंग मिक्सिंगको माध्यमबाट थोप्लो र सतहहरूको प्रभाव प्राप्त गर्दछ। एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोत हो ...
एलईडी वाल धुनेको प्राविधिक सिद्धान्त के हो?
हालका वर्षहरूमा एलईडी भित्ता धुने बिभिन्न ठाउँहरूमा व्यापक प्रयोग भइरहेको छ, जस्तै कम्पनी र कर्पोरेट भवनहरूको भित्ता प्रकाश, सरकारी भवनहरूको प्रकाश, ऐतिहासिक भवनहरूको भित्ता प्रकाश, मनोरञ्जन स्थलहरू, इत्यादि; यसमा समावेश भएको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। बाट ...
बाहिरी भवनहरूको प्रकाशले शहरमा के परिवर्तन गरेको छ?
भवन प्रकाश परियोजना के हो? भवन प्रकाशले हामीलाई के परिवर्तन गरेको छ? एउटा सहरमा जहाँ मानिसहरू बस्दछन्, खाउँछन्, बाँच्दछन्, र यात्रा गर्छन्, भवन शहरको मानव कंकाल र रगतको रात हुनसक्दछ, जसले शहरको सञ्चालन र विकासको प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्दछ। कुञ्जी Pa को रूपमा ...
एलईडी प्रकाश उत्पादन को प्रतिद्वंद्वी - गर्मी dissipation?
हालका वर्षहरूमा, एलईडी चिप टेक्नोलोजीको द्रुत प्रगतिसँग, एल ई डीको व्यवसायिक अनुप्रयोग धेरै परिपक्व भएको छ। एलईडी उत्पादनहरू उनीहरूको सानो आकार, कम उर्जा उपभोग, लामो सेवा जीवन, उच्च चमक, वातावरणीय संरक्षणको कारण "हरित प्रकाश स्रोतहरू" को रूपमा चिनिन्छन्।
एलईडी प्रकाश गुणस्तरको शीर्ष दश सूचकहरूको विस्तृत विवरण?
प्रकाशको गुणस्तरले प्रकाश स्रोतले भिजुअल प्रकार्य, दृश्य आराम, सुरक्षा, र दृश्य सुन्दरता जस्ता प्रकाश संकेतकहरू मिल्छ कि भनेर दर्साउँछ। प्रकाश गुणस्तर सूचकहरूको सहि अनुप्रयोगले तपाईंको प्रकाश स्थानमा बिल्कुल नयाँ अनुभव ल्याउनेछ, विशेष गरी LED प्रकाशमा ...
वर्तमान स्थिति: Austech प्रकाश> समाचार केन्द्र> कस्तो प्रकारको प्रकाश एक LED प्वाइन्ट प्रकाश स्रोत हो? एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोत कस्तो प्रकारको हो? एलईडी पोइन्ट प्रकाश स्रोत एक नयाँ प्रकारको सजावटी बत्ती हो, जुन रैखिक प्रकाश स्रोत र बाढी प्रकाशको लागि पूरक हो। स्मार्ट बत्तीहरू जुन ...
डीजे लाइट्स, एलईडी पिक्सेल लाइट, भवन फ्याकेड एलईडी प्रकाश, स्टेज प्रकाश, Dj Facade नेतृत्वमा प्रकाशहरू, 3d नेतृत्व ट्युब्स,
बिन्दु प्रकाशको किन कारणहरू छन् ...
के नेतृत्व रेखीय बत्ती र रेलको टी ...
LED को अनुप्रयोग परिदृश्य के हो ...
कसरी एलईडी बाढी को दैनिक रखरखाव छ ...
नेतृत्व रेखा लाईन ब्रान्डले किन तिर्नुपर्दछ ...